२०७४ असार ३१ शनिबार ०७:२०:००
“ए ! छिटो माला ले माला,” घरभित्र पस्न नपाउँदै उसले ढोकैबाट स्वास्नीलाई आदेश दियो ।
“होइन, केको माला ? बेला न कुबेला केको माला चाहियो ?” भित्र भान्सातिरबाट स्वास्नी आफ्नै सुरमा भुत्भुताई ।
“केको कुबेला ? यो शुभबेला हो । मलाई माला चाहियो, माला । अरूले माला लगाइसके । मेरो गला रित्तो भो । तुरुन्त माला किन्न पठा,” उसले स्वास्नीलाई थप आदेश दियो ।
“अनि किन चाहियो त यति हतार हतारमा माला ?” स्वास्नीले नजिकै आएर सोधी ।
“हरे लाटी ! मैले टिकट पाएँ के टिकट । अब म पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएँ । उम्मेदवार भएपछि टोलटोलमा भोट माग्न जानु पर्‍यो । भोट माग्न जाँदा रित्तो घाँटी लिएर त जानु भएन नि । अनि चाहिएन त माला ?” उसले दंग पर्दै स्वास्नीसँग भन्यो ।
“ए ! कुरा त्यसो पो,” लोग्नेको कुरा सुनेर स्वास्नी पनि दंग परी । लोग्नेको मुखमा हेरेर मुसुक्क हाँसी र माला किन्न पठाई ।
एकैछिनमा माला आइपुग्यो । आफैंले आफ्नो गलामा माला उन्यो । ऐनामा आफूलाई हेर्‍यो र दाह्री मुसार्‍यो । यसो हेर्दा अबचाहिँ उसलाई आफू साँच्चैको उम्मेदवार जस्तो लाग्यो ।
माला लाउनासाथ ऊ हतार–हतार बाहिर निस्कन खोज्यो । स्वास्नीचाहिँले भनी, “पख्नुस्, पख्नुस्, एकछिन ।”
“अब किन पर्खने, मलाई हतार छ हतार । ढिलो भए भोट अरूले लैजालान्,” हतारकै शैलीमा भन्यो ।
“होइन, मालाले मात्र अलि सुहाएन हजुरलाई । अलिकति अबिर पनि दल्नुपर्छ गालामा,” स्वास्नीले भनी ।
स्वास्नीले अबिर निकाली र गालामा दलिदिई । उसले फेरि ऐना हेर्‍यो । मुसुक्क हाँस्दा अबिरको बीचमा सेता दाँत देखिए । अलिकति अबिर पनि दलिसकेपछि उसले आफूलाई विजयी भैसकेको कल्पना ग¥यो । अहा ! विजयको त्यो क्षण । ऊ दंग पर्‍यो ।
ऊ फेरि निस्कन खोज्दै थियो, स्वास्नीले एक्लै होइन, दलबलसहित निस्कने सल्लाह दिई । स्वास्नीचाहिँले छिमेकी, नातागोता, शुभचिन्तक सबलाई लोग्नेले टिकट पाएको समाचार प्रसारण गरी । अरू गाउँले पनि माला लिएर उसको घरमा आइपुगे । आउनेको लाममा पार्टीका कार्यकर्ता पनि थपिए । कार्यकर्ताहरू ‘नेताजी जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाउन थाले ।
माला लगाइदिनेको तँछाडमछाड चल्यो । फोटो खिच्ने पत्रकारहरू पनि धुइरिए । उसको घाँटीलाई माला धान्न धौधौ पर्‍यो । तर पनि उसले ती माला घाँटीमा लगाइरह्यो । आफ्नो प्रिय माला भुइँमा राख्नुलाई उसले मालाको अपमान हुने ठान्यो । अबिर र मालाले पुरिएको अनुहारबाट ङिच्च दाँत देखाउँदै ऊ नमस्कार मुद्रामा प्रस्तुत भैरहेको थियो ।
अबिर र मालाको कम्बिनेसनले ऊ अर्कै संसारबाट यो धर्तीमा झरेको प्राणीझैं देखिएको थियो । तर, उसलाई यो देशको सबैभन्दा ठूलो मान्छे भएको गर्व अनुभूत भैरहेको थियो । मानवबाट महामानव भएको अनुभूति गर्दै थियो ऊ ।
अघिपछि लाबालस्करसहित ऊ चुनाव प्रचारप्रसार गर्न गाउँगाउँमा, टोलटोलमा, घरघरमा पुग्यो । गाउँगाउँमा उसले थप माला र अबिर पायो, ताली पायो । त्यति मात्र होइन, भोटको अश्वासन पनि पायो । हिजो उसको पार्टीलाई जो मिडियामा गाली गर्थे, उनीहरूबाट पनि प्रशंसा नै प्रशंसा पायो । तर, गाली पटक्कै पाएन । कसैबाट पाएन । कतैबाट सुनेन । जताततै ताली, बधाई र नमस्कारको ओइरोमात्र पायो ।
टोलटोल घुम्दा ऊसँगै उसको घाँटी पनि घुम्यो । घाँटीसँगै माला पनि घुम्यो । लाग्यो, मालाले पनि उसका लागि भोट मागिदिइरहेको छ । सबैले मालाधारी उसलाई भोट दिन्छन् । उसले मालालाई भित्रैदेखि धन्यवाद दियो । मनमनै सोच्यो, “घाँटीमा माला नभएको भए उसको चुनावी प्रचारमा यति धेरै माहोल कहाँ बन्थ्यो र ! हे माला माहात्म्य ! हेर यी सुन्दर फूलहरू, जो मेरो घाँटीमा सजिएका छन् । मेरो व्यक्तित्वलाई सिँगारेका छन् । धन्य म । धन्य मेरो माला ।”
गाउँ घुम्दा विपक्षी पार्टीका मान्छे र हिजो आफूलाई गाली गर्नेले समेत ताली, माला र भोटको आश्वासन दिएको देख्दा उसलाई अचम्म पनि लाग्यो । सोच्यो, “आजकल म क्या पपुलर भएछु ।”
ऊ भित्रभित्रै दंग पर्‍यो । जित्नेमा ऊ ढुक्क भयो । उसलाई चुनाव हुने दिन पर्खिन पनि गाह्रो भैरहेको थियो । जित्ने हतारोले आजै चुनाव भैदिहाले हुन्थ्यो भनेझैँ भयो ।
भोट खसाल्ने दिन आयो । उसले त्यस दिन अझ अर्को नयाँ माला किन्यो । नयाँ माला लगाएर मतदान केन्द्रतिर घुम्न थाल्यो । मतदान केन्द्रमा मत हाल्नेहरू लामबद्ध थिए । उसलाई भोट दिने आश्वासन दिएकाहरू सबै लाइन लागेका थिए । विपक्षीलाई भोट दिन्छु भन्ने कसैलाई पनि उसले लाइनमा देखेन । अब त झन् उसलाई चुनाव जित्नेमा कुनै शंका रहेन । ऊ दंगमात्र होइन, महादंग भयो ।
चुनाव सम्पन्न भयो । मतगणना सुरु भयो । मतपेटिकाबाट धमाधम विपक्षीको नाममा छाप लगाइएका मतपत्रहरू निस्कन थाले । १, २, ३ गर्दै विपक्षीले लिड गर्दै गयो । विपक्षीको भोट आएको कुरा उसलाई विश्वास लागेन ।
“लाइनमा सबै मेरा मतदाता, ढ्वांगमा सबै अरूको मत ? यो कसरी हुन्छ ?” उसले आफैंलाई प्रश्न गर्‍यो । उत्तर पनि आफैंले दियो, “अहँ, हुनै सक्दैन ।”
फेरि सोच्यो, “कतै म निद्रामा सपना देखिरहेको त छैन ?” निद्रामा हो कि भनेर उसले आफूले आफ्नो गालामा थप्पड हान्यो । अहँ, त्यो सपना थिएन । त्यो विपना नै थियो ।
सपना नभएर विपनामै विपक्षीको मत अगाडि भएको पक्का भएपछि ऊ रन्थनियो । भन्यो, “यहाँ पक्कै धाँधली भयो ।” उसले प्रश्न गर्‍यो, “भोट त सबले मलाई दिन्छु भन्थे टोलटोल घुम्दा । तर, कसरी विपक्षीको भोट बढी आउँछ ?” ऊ एक्कासि उत्तेजित हुँदै मतगणनास्थलमै जोडले करायो, “धाँधली ! धाँधली !! धाँधली !!!”
“छैन धाँधली भएको,” निर्वाचन अधिकृतले भन्यो । उसका कार्यकर्ताले पनि उसलाई सम्झाए । धाँधली नभएको कुरा बुझाए ।
मतगणना सकियो । परिणाम आयो । विपक्षीकोे पल्ला भारी भयो । ऊ पराजित भयो ।
परिणाम आफ्नो प्रतिकूल भएपछि उसले हतार–हतार आफ्नो घाँटीको माला खोल्यो र हातैमा माला बोकेर घरतिर कुलेलम ठोक्यो । उसका पछि अब कुनै कार्यकर्ता थिएनन् । फगत् ऊ एक्लो थियो । घर पुगेर हातमा बोकेको माला टि–टेबलमा राखेर ऊ सोफामा थचक्क बस्यो ।
“ए ! पानी ले,” स्वास्नीलाई आदेश दियो । सोफामा बसेर घाइते बाघझैं ऊ छट्पटिन थाल्यो ।
स्वास्नीले गिलासमा पानी ल्याइदिई । एकैचोटिमा एक गिलास पानी घुड्क्यायो ।
स्वास्नी पनि उसको छेउमा बसी र सहानुभूति दिन थाली, “चिन्ता नगर्नुस् । राजनीति भनेको यस्तै हो । कहिले हार कहिले जित ।”
“उता जा उता । जान्ने हुन्छे धेर । बुझ्नु न सुझ्नु । केको हुन्छ हार ! धाँधली भो धाँधली,” जनताले भोट नदिएको रिस उसले स्वास्नीमाथि पोख्यो ।
स्वास्नी उठेर अर्कै कोठातिर लागी । ऊ सोफामा बसेर सुस्केरा हाल्न थाल्यो । पराजयको चोटमा लाउने मलम उसले पाएन ।
एकैछिनमा विपक्षीले विजय जुलुस निकाल्यो । उसैको घर हुँदै विजय जुलुस अगाडि बढ्यो । उसले झ्यालको पर्दा सारेर बाहिर चिहायो । विजयी हुनेको गलाभरि माला थियो । गालाभरि अबिर नै अबिर थियो । अघिपछि ठूलो लावालस्कर थियो । लावालस्करमा पहिले उसलाई भोटको आश्वासन दिने र माला र अबिर लगाइदिनेहरू सबैभन्दा अगाडि थिए ।
बल्ल उसले राजनीतिको महिमा बुझ्यो । राजनीतिको बुझिनसक्नुको चरित्र देखेर उसले आफ्नो मन बुझाउन खोज्यो तर सकेन ।
बाहिर जित्नेको नाममा ‘जिन्दाबाद’का नारा लागिरहेका थिए । विपक्षीको गलाभरिको माला उसका लागि खपिनसक्नु भयो । त्यो विपक्षीको गला सिँगार्ने मालादेखि उसलाई रिस उठ्यो । मालासँग उसलाई भयंकर घृणा जाग्यो । टि–टेबलमा भएको मालालाई उसले घुरेर हेर्‍यो । मालामा उसले विपक्षीको अनुहारशिवाय केही देखेन । मालाले आफ्नो मात्र गला सिँगार्छ भनेको त विपक्षीको गला पनि पो सिँगार्ने रहेछ । कस्तो दहिच्यूरे माला । त्यो विपक्षीको गला सिँगार्ने माला देखेर उसको रिसको पारो झन् झन् बढ्दै गयो । मालामा उसले फूल होइन, अब काँडैकाँडा देख्न थाल्यो । उसले दाह्रा किट्यो । टि–टेबलको मालालाई उठाएर चुँडाल्यो र टुक्राटुक्रा पारेर बाहिर फाल्यो ।
माला फालेर पुनः एक पटक जुलुसतिर हेर्‍यो । विजय जुलुसमा अझ धेरै मानिसहरू जोडिँदै थिए । विपक्षीका घाँटीमा मालाहरू पनि थपिँदै थिए । उसले भने विपक्षीको घाँटी सिँगार्ने सम्पूर्ण मालालाई वर्गशत्रू घोषणा गरिसकेको थियो ।